Vous êtes ici: Accueil → Economie → 2020 → juin → 30 → Coopération bilatérale : Engagement de l’Inde réitéré par le président Ram Nath Kovind
Redaction Midi Madagasikara 30 juin 2020 3 Commentaires
dolso 30 juin 2020 at 17 h 48 min · Edit
Mampanahy mihintsy ny ho avy ny firenena: hitsofoany Inde daholo koa izay tsy an-tanany frantsay sy vozongo afa. Izao, noho ny covid-19 ny frantsay mikasa hamerina antaniny ny fanamboarana ny fanafody toa doliprane dia mendy Inde hanetsina izay very noho ny covid-19. Tsy misy circuit afahanao ve Mr Roger R, mba ho malagasy ny tompon’andraiktra mpamokatra e?
Roger Richard ANDRIANJANAHARY 30 juin 2020 at 15 h 34 min · Edit
Miombokevitra aminao aho.Noho io antony voalazanao io no tsy nahazaoako financement hanamboarana Médicaments Génériques taty Afrique. Dia izao Madagascar et l’Afrique sont les destinations des faux médicaments, des médicaments sous-dosés, des médicaments hors normes…..
Mateza 30 juin 2020 at 8 h 21 min · Edit
Mila mailo ihany amin’itony fifanarahana itony satria i Inde no firenena mamela ny
fanamboarana fanafody sandoka mihoatra amin’i chine. Vita avy ao daholo ny fanafody
farany tsotra ka hatramin’ny saro-pady indrindra.Tsy hisalasalàny ny mivarotra izany na
dia poizina aza no ao anatiny .
I Inde no tena anisan’ny tompon-antoka amin’ny fahafatesana olona marobe aty Afrika.